बिहान खाली पेटमा खान हुदैन यस्ता खानेकुरा, थाहा पाउनुहोस् किन ? | Safal Khabar
बिहान खाली पेटमा खान हुदैन यस्ता खानेकुरा, थाहा पाउनुहोस् किन ?
शनिबार, २९ फागुन २०७७, ११ : ४९
एजेन्सी । बिहान खाली पेटमा थोरै थोरै खाना खानुपर्छ । बिहान खाने खानेकुराले मानिसको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यलाई प्रभावित बताउँछ । गलत खानेकुराले पाचन प्रक्रियामा समस्या पैदा गर्छ । त्यसैले बिहान केही यस्ता खानेकुरा खानुहोस् जसले तपाईंको स्वास्थ्यलाई स्वस्थ्य राख्छ ।